1 August 2010 yeyintnge's Diary.docx file here1 August 2010 Yeyintnge's Diary Summary only...
ယုံကြည်ချက်ကို အသက်ထက် တန်ဖိုးထားသူ ဇင်လင်းSaturday, July 31, 2010 သြဂုတ်လ (၂) ရက်နေ့နီးလာလျှင် ဦးလှသန်းအား သတိရမိမြဲဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ အောင်မြင်ရေးအတွက် ဦးလှသန်း (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ကို ကိုးကျွန်း မဲဆန္ဒနယ်) စစ်အာဏာရှင်၏ အကျဉ်းထောင်ထဲ၌ ကျဆုံးခဲ့ သည်မှာ ဤ ၂ဝ၁ဝ တွင် (၁၄) နှစ်ပင် ပြည့်ပေပြီ။ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး တိုက်ပွဲကား ယနေ့တိုင် ဆက်လက်ဆင်နွှဲ နေကြရဆဲ။ ဦးလှသန်းမှာမူ သမိုင်းရေးတာဝန်ုကျေပွန်သည့် နိုင်ငံ့သားကောင်းတယောက်အဖြစ် သ မိုင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင် ကမ္ပည်းတင် ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ဦးလှသန်းသည် ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ခရီးသွားလာရေးခက်ခဲရုံမက စည်းရုံးရေးလုပ်ရန်လည်း မလွယ်ကူသော ကိုကိုးကျွန်း မဲဆန္ဒနယ်၌ အ မျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် စွန့်စွန့်စား စားဝင်ရောက် အရွေးခံခဲ့သူဖြစ်သည်။ အရပ် ၅ ပေ ၆ လက္မခန့် အသား ညိုညို ပိန်ပိန်ပါးပါး ဖြစ်သော်လည်း ဦးလှသန်းသည် ကျစ်လစ်ကြံ့ခိုင်မှု ရှိသူ ဖြစ်သည်။ ဥပဒေအကျိုးဆောင် ဖြစ်၍လားမသိ၊ အဝတ်အစားကို အမြဲသပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်ဆင်တတ်သည်။ အဖွဲ့ချုပ်သို့လာသည့်အခါ တိုင်း ပင်နီတိုက်ပုံအင်္ကျီ အမြဲဝတ်လေ့ရှိသူ ဖြစ်သည်။ ရှေ့နေအဖြစ် အ သက်မွေးသော်လည်း စကားကိုလိုအပ်မှသာ ပြောလေ့ရှိသည်ကို သတိ ထားမိသည်။သူနှင့် စာရေးသူ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီကပင် ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရန်ကုန်တိုင်း ရုံးတွင် စာရေးသူ ရုံးအဖွဲ့မှူးတာဝန်ယူခဲ့စဉ်က ဖြစ်သည်။ ဦးတင်မောင်ဝင်း (အင်းစိန်ထောင် အတွင်း ၁၈၊၁၊ ၁၉၉၁။ တွင် ကျဆုံးသူ အ မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခရမ်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်) ၏ မိတ်ဆက်ပေးမှုအရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသန်း၊ သူနှင့်အတူ ပါလာသူ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သန်းတို့ကို စတင်သိကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ဦးလှသန်း သည် အသက်အားဖြင့် (၄၂) နှစ်မျှသာရှိသေးသည်။ထိုစဉ်က ရန်ကုန်တိုင်းရုံးသည် အဖွဲ့ချုပ်မှ ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်စာရွက်စာတမ်းများကို နေ့စဉ် (အခမဲ့) ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်၊ ထိုသို့အခမဲ့ဖြန့်ဝေနိုင်စေရန် စာရေးသူ၏ စာပေမိတ်ဆွေများက လိုအပ်သောစက္ကူများကို လှူဒါန်းခဲ့ကြ၍ဖြစ်သည်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်၏ မြို့နယ်ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲများတွင် ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်းများကို လက်နှိပ်စက်ဖြင့်ရိုက်နှိပ်၍၎င်း၊ ကက်ဆက်ခွေ၊ ဗီဒီယိုခွေ အဖြစ်ကူးယူ၍၎င်း၊ သက်သာသောဈေးနှုန်းများဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းရုံးက ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုခွေမိန့်ခွန်း မဝယ်နိုင်သူများကို တိုင်း ရုံးက ငှားရန်းသည့် စနစ်ဖြင့်လည်း မျှဝေသည်။ ဦးလှသန်းသည် ထိုမိန့်ခွန်းခွေများကို သူပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ကာ၊ ပုံမှန် တက်တက် ကြွကြွ ဝယ်ယူ၍ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ လူထုထံ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးလေ့ရှိသည်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက် ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲများတွင် အခါအားလျော်စွာ လိုက်ပါအားပေးတတ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် (၁၉၈၉-၉ဝ) ကာလများ တွင် ဦးလှသန်းနှင့် သူ့မြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများမှာ အဖွဲ့ချုပ် ရန်ကုန်တိုင်းရုံးသို့ နေ့စဉ်ပုံမှန်လာကြသူများတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ လာ တိုင်းလည်း မြို့နယ်စုံမှရောက်လာကြသော အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ၏ အလွတ်သဘောထိုင်ကြသည့် ဆွေးနွေးဝိုင်းများတွင် ဦးလှသန်း စိတ် အားထက်ထက်သန်သန် ပါဝင်ဆွေးနွေးလေ့ရှိသည်။ရန်ကုန်တိုင်းရုံးသို့လာသည့် အခါများတွင် ရံဖန်ရံခါ ရန်ကုန်တိုင်းစည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဆရာဦးထွန်းတင် (တရားရုံးချုပ် ရှေ့နေ၊ ကိုကိုးကျွန်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း၊ ကွယ်လွန်)၊ ဦးတင်မောင်ဝင်း (ခရမ်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ကွယ် လွန်)၊ ဦးမြင့် (၁၉၇၄ အလုပ်သမားအရေး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း)၊ ဦးသိန်းတင် (စာရေးဆရာ တင်သိန်းမောင်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၈ ၁၉၉၈ အကျဉ်းကျနေစဉ် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၌ ကွယ်လွန်သူ) စသူများနှင့်လည်း မပြတ်ထိတွေ့ဆွေးနွေးမေးမြန်းမှုများလုပ်တတ်သည်။ မသိမီလိုက်သော အတိတ်က နိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်များ၊ အတွေ့အကြုံများ၊ အယူအဆများကို ဂရုတစိုက် လေ့လာမှတ်သားတတ် သည်။ သူနှင့် စကားပြောဖြစ်သော အတွေ့အကြုံများကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိမှ သူ၏ နိုင်ငံရေး၌ စိတ်ထက်သန်ပုံ၊ ပညာလိုလားပုံ၊ စာ ဖတ်အားကောင်းပုံ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အားကျအတုယူတတ်ပုံတို့ကို ပြန်လည် မြင်ယောင်လာသည်။သူ့ဘဝနောက်ခံကို အကြမ်းဖျင်းကြည့်လျှင် သူသည် တပ်မတော် (ရေ) တွင် အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ချိန် (၁၉၆၅) မှ စတင်စစ်မှုထမ်း ခဲ့သည်။ ရတနာပုံရေတပ်စခန်း၊ စစ်တွေရေတပ်စခန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ရေ)၊ ရေတပ်ကမ်းတက်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်း၊ စစ် ရေယာဉ် (၁၁ဝ)၊ စစ်ရေယာဉ် ရန်ကြီးအောင် စသည့်နေရာဌာနများတွင် တာဝန်ထမ်းခဲ့သည်။ သို့သော် စစ်မှုထမ်းရင်း သူ့ဘဝတိုး တက်မှုအတွက် မနားမနေ ကြိုးစားပညာရှာခဲ့သည်။ လက်ရေးတိုပညာနှင့် စာရင်းအင်းပညာကို တပ်တွင်း၌ပင် သင်ယူတတ်မြာက်ခဲ့ သည်။ အတန်းပညာကိုလည်း တပ်တွင်းမှာပင် ဆက်လက်အားထုတ် သင်ယူခဲ့ရာ စစ်သက် (၁ဝ) နှစ်ပြည့်သည့် (၁၉၇၅) တွင် တပ် တွင်းမှပင် (၁ဝ) တန်းကို ရူပဗေဒဂုဏ်ထူးဖြင့် ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးနောက်တွင် ပညာတတ်လိုစိတ် ပိုမိုပြင်း ပြထက်သန်လာခဲ့သည်ဟု ဦးလှသန်းကပြောဖူးသည်။ ထို့ကြောင့် အသက် (၃ဝ) ပြည့်သည့် (၁၉၇၇) တွင် တပ်မှ အငြိမ်းစားယူ၍ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ဥပဒေပညာ အဓိကဖြင့် ပညာဆက်လက်သင်ယူ သည်၊ ၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ်တွင် သူ ဥပဒေ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ ထို့ နောက် ရှေ့နေလောကသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ အထက်တန်းရှေ့နေ၊ ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ရှေ့နေအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံအနှန့် တရားရုံးများတွင် ဥ ပဒေအကျိုးဆောင်အဖြစ် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ ဦးလှသန်းသည် ပညာတန်ဖိုးကို သိရှိလာသူဖြစ်သည့်အ လျောက်၊ တဖက်တွင် ပရဟိတစိတ်ဖြင့် ရပ်ရေးရွာရေးလူမှုရေးကိစ္စများတွင်လည်း ပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၁၉၇၈ မှ ၁၉၈၈ အထိ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့တွင် ရုံးအဖွဲ့မှူးတာဝန်နှင့် သက်သာချောင်ချိရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး တာ ဝန်များကိုလည်း မအားလပ်သည့်ကြားမှ ဦးလှသန်း ထမ်းရွက်ခဲ့သည်။၁၉၈၈ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကာလတွင် ဦးလှသန်းသည် ရန်ကုန်ရှေ့နေများအစည်းအရုံးနှင့်အတူ လူထုဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ရာ တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ (၂၇) တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းပေါ်ထွန်းလာသောအခါ ဦးလှသန်းသည် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တွင် မြို့နယ်ဆော်သြရေးအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူ၏ ရိုးသားမှု ကြိုးစားမှု ပရဟိတစိတ်ထားရှိမှု လူမှုဆက်ဆံ ရေးကောင်းမွန်မှုစသည့် အရည်းအချင်းများကြောင့် အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များက သူ့အား ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ပထမအကြိမ် ညီလာခံတွင် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်၎င်း၊ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်၎င်း ရွေးချယ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ဤသို့ဖြင့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ၁၉၈၉ နိုဝင်ဘာ (၁ဝ) ရက်စွဲဖြင့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်း ပမည့်နေ့ရက်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း (တင်သွင်းခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း) တို့နှင့် စပ်လျဉ်း သည့် နေ့ရက်များကြေညာခဲ့သည်။ ထိုကော်မရှင်ကြေညာချက် အမှတ် (၃၂၆) အရ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် မေလ (၂၇) ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းများကို ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၈) မှ ၁၉၉ဝ ဇန်နဝါရီလ (၃) ရက်နေ့အတွင်း တင်သွင်းကြရမည်ဖြစ်သည်။ ဦးလှသန်းသည် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ပထမအကြိမ်ညီလာ ခံတွင် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်၎င်း၊ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်၎င်း ရွေးချယ်ခံထားရသူဖြစ်၍ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ကော်မရှင်သို့ အမည်စာရင်းတင်သွင်းရမည် ဖြစ်သည်။သို့သော် ဦးလှသန်းက ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း မြို့နယ် (၄၂) ခု၊ မဲဆန္ဒနယ် (၆၁) နယ် ရှိသည့်အနက် ကိုကိုးကျွန်း မဲဆန္ဒနယ်သို့ သွား ရောက်အရွေးခံမည့် ကိုယ်စားလှယ် မရှိဖြစ်နေသည်ကို သတိပြုမိပုံရသည်။ ထို့ပြင် ကိုကိုးကျွန်းစုသည် ကိုကိုးကျွန်းကြီး ကိုကိုးကျွန်း ငယ်နှင့် စားပွဲကျွန်းဟူ၍ (၃) ကျွန်းရှိသည့်အနက် ကျွန်းမကြီး၌သာ လူနေများသည်။ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ ထိုကျွန်းစုကလေး သည် မြန်မာပြည်မ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၏တောင်ဖက် မိုင် ၂ဝဝ ခန့်တွင်တည်ရှိသဖြင့် သွားလာမှုလွယ်ကူလှသည် မဟုတ်ပေ။ နေ ထိုင်သူအများစုမှာ ရေတပ်၊ ရဲအဖွဲ့နှင့် အရပ်ဖက်ဝန်ထမ်းမိသားစုများ ဖြစ်သည်။ အုန်းခြံ လုပ်ငန်းလုပ်သူ အရပ်သားမိသားစုများအပါ အဝင် ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ် လူဦးရေမှာ (၁ဝဝဝ) သာသာ ကလေးသာ ရှိသည်။ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူမှာ (၆၁၃) ဦးသာရှိ၍ စစ်တပ်သြဇာ လုံးဝ သက်ရောက်ရာ မြို့နယ်လည်း ဖြစ်သည်။ကိုကိုးကျွန်းစုသည် ၁၉၅၈ ခုနှစ် စစ်တပ်က ပထမအကြိမ် အာဏာသိမ်းစဉ်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို အကျဉ်းချရာနေရာအဖြစ် နာမည်ဆိုးဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏ အစာငတ်ခံတိုက်ပွဲ အောင်မြင်ပြီးနောက် ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် ထိုကျွန်း ထောင်ဖျက်သိမ်းခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို ကျွန်းစုမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူများ၏ ဒီမိုကရေစီဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းရေး၊ အဖွဲ့ချုပ်အတွက် လည်း ပထဝီအရအရေးပါသည့် မဲဆန္ဒနယ်တနယ် မဆုံးရှုံးရေးအတွက် ကိုကိုးကျွန်း မဲဆန္ဒနယ်သို့သွားရောက် အရွေးခံရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြောင်း ဦးလှသန်းက စကားစပ်၍ ပြောဖူးသည်။ ဤသို့ဖြင့် ဦးလှသန်းအား အဖွဲ့ချုပ်က ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကိုကိုးကျွန်း မဲဆန္ဒနယ် တွင် အဖွဲ့ချုပ်အားကိုယ်စားပြုယှဉ်ပြိုင်ရန် လက်ခံအတည်ပြုခဲ့သည်။၁၉၉ဝ မေလ (၄) ရက်နေ့တွင် ဦးလှသန်းနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင် (၄) တို့ ကိုကိုးကျွန်းစု ဆီသို့ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ သူတို့ မရောက်မီကပင် ကျွန်းအာဏာပိုင်တို့ထံ အဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်အား မည်သည့်အကူအညီမှမပေးရန် ညွှန်ကြားချက်ကရောက်နှင့်ပြီး ဖြစ်ပုံရကြောင်း ဦးလှသန်းက ပြောပြဖူးသည်။ သူတို့အဖွဲ့နေထိုင်ရေးကိုပင် အာဏာပိုင်တို့ကခက်ခဲအောင် လုပ်ထားသဖြင့်၊ ကိုယ်တိုင် သစ်ဝါးခုတ်ကြကာ ယာယီတဲဆောက် နေခဲ့ရသည်။ သူ့ကို တအိမ်တက်ဆင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်လည်းမပြု၊ စာရွက်စာတမ်းလက်ကမ်း စာစောင်လည်း ဝေငှခွင့်မပြုခဲ့ဟု ပြောသည်။ မဲဆန္ဒရှင်အများစုမှာ ဝန်ထမ်းများဖြစ်သဖြင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများသို့ သွားရောက်လည် ပတ်ခြင်းမပြုပါဟုလည်း ဝန်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးရန် ဦးလှသန်းကို အာဏာပိုင်များက ဖိအားပေးခဲ့သည်။ သို့သော် သူက လက်မှတ်မ ထိုးနိုင်ဟု တင်းတင်းမာမာငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သူအားလိုလိုလားလားဖိတ်ခေါ်သည့် အိမ်အချို့သို့ ဦးလှသန်း သွားရောက်လည်ပတ်ခွင့် ရ ခဲ့သည်၊ ထိုအိမ်များကတဆင့် ကျန်မဲပေးမည့်သူများထံ၊ သူနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သတင်းများရောက်ရှိခဲ့သည်၊သူ့ပြိုင်ဘက်မှာ ရေတပ်စစ်လက်နက်ခဲယမ်းတပ် (၂၄) တပ်မှူး (အငြိမ်းစား) ကိုကိုကျွန်း မဆလပါတီယူနစ် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးအောင် သိန်း (တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ) ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းမှ ပြည်မနှင့် အလှမ်းဝေးသည့် ကျွန်းစုကလေးမှ မဲဆန္ဒရှင် (၆၁၃) ဦးမှာ ဦးအောင်သိန်းအား မဲပေးကြရန် ကျွန်းအာဏာပိုင်တို့က ပြောထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ကျွန်းသူကျွန်းသားတချို့က ပြောကြသည်။ သို့သော် ဦးလှသန်းတို့ရဲဘော်ငါးဦးအဖွဲ့သည် ရက်သတ္တသုံးပတ်မျှ အချိန်အတောအတွင်း အကန့်အသတ်များအကြား မှ ကျွန်းသူကျွန်းသားတို့ထံ ပြည်မမှ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံသတင်းစကားများကို အရောက်ပါးခဲ့နိုင်ကြသည်။မေလ (၂၇) ရက်နေ့တွင် ကိုကိုးကျွန်းစုရှိ မဲရုံ (၂) တွင် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူ (၆၁၃) ဦးအနက် (၄၃၂) ဦးလာရောက် မဲပေးခဲ့ကြသည်။ ဦး လှသန်းက ၂၄၆ မဲ (၅၆.၉၄) ရာခိုင်နှုန်း၊ တစညကိုယ်စားလှယ်က ၁၈၆ မဲ (၄၃.ဝ၆) ရာခိုင်နှုန်းစီအသီးသီး ရရှိခဲ့ကြသည်။ ရေတပ် အ ငြိမ်းစား အရာရှိကြီးတဦးနှင့် ရေတပ်အငြိမ်းစား ရဲဘော်တဦးတို့၏ အားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်သည်။ စစ်အာဏာဖြင့် ချုပ်ကိုင်ထားသည့် မဲ ဆန္ဒနယ်ဖြစ်၍ ဦးလှသန်း၏အောင်ပွဲမှာ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ အောင်မြင်မှုအတွက် ထူးခြားထင်ရှားသည့် လက္ခဏာဟု ဆိုနိုင် သည်။ သူတို့ (ရဲငါးဘော်) အား ရန်ကုန်အပြန်ခရီးတွင် သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသည်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် မဲဆန္ဒနယ် (၄၈၅) နေရာအနက်မှ (၄၄၇) နေရာတွင် ဝင်ရောက်အရွေးခံခဲ့ရာ၊ (၃၉၂) နေရာအနိုင် ရခဲ့သည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးကောက်ပြီးသော်လည်း လွှတ်တော်ပေါ်ပေါက်လာခြင်း မရှိသဖြင့်၊ အဖွဲ့ချုပ်က ၁၉၉ဝ ဇူလိုင်လ (၂၈-၂၉) တွင် ဂန္ဒီခမ်းမ၌ ပထမအကြိမ် အဖွဲ့ချုပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ပဏာမညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကြီး ကျင်းပခဲ့သည်။ ဂန္ဒီခမ်းမကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ကာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ခေါ်ယူဖွဲ့စည်းရေးသဘောထားကို ပြည်သူသို့ အသိပေးခဲ့ သည်။ ဂန္ဒီအစည်းအဝေးမတိုင်မီတရက် (၂၇ ဇူလိုင် ၁၉၉ဝ) တွင် နဝတအဖွဲ့ကလည်း ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၉ဝ) ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်။ (၁/၉ဝ) ၏အနှစ်ချုပ်မှာ ယာယီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲ၍ အစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်းကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ လက်မခံ၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ပါက ထိရောက်စွာ အရေးယူမည် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ပစ်ပယ်ကြောင်း။ ပြည်သူ့ ဆန္ဒသဘောထားကို ဥပဒေအရ၎င်း။ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာအရ၎င်း နဝတ က မလေးမစားလုပ်လိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ဆက်လက်၍ ၁၉၉ဝ စက်တင်ဘာ (၆) ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် (ယာယီ) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည် မောင် အား (၁/၉ဝ) ကို ဆန့်ကျင်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဖြင့် နဝတ က အဖွဲ့ချုပ်အားစတင် ဖြိုခွဲတော့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် (၂) ကျော်လာသည်အထိ စစ်အုပ်စုက အာဏာစွန့်လွှတ်မည့် လက္ခဏာမပြတော့။ သို့ဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့သည် ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆွေးနွေးမှုများ လုပ်ခဲ့ကြ သည်။ ယင်းသို့ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ကြသည့်အနက် ၁၉၉ဝ စက်တင်ဘာ (၂၉) နေ့တွင် အမရပူရမြို့မဲဆန္ဒနယ် (၂) ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘဘွား နေအိမ်၌ ပြုလုပ်သော ယာယီအစိုးရဖွဲ့စည်းရေး လျှို့ဝှက် အစည်းအဝေး၊ စက်တင်ဘာ (၃ဝ) မန်းအ နောက်တောင်မြို့နယ် အဖွဲ့ချုပ်ရုံး၌ပြုလုပ်သော ယာယီအစိုးရဖွဲ့စည်းရေး လျှို့ဝှက်အစည်းအဝေးနှင့် ၁၉၉ဝ အောက်တိုဘာ (၁) အမာ ခံ (၆) ဦး ယာယီစင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေး အစည်းအဝေးများလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ဦးလှသန်းသည် စက်တင်ဘာ (၂၉၊၃ဝ) အစည်းအဝေးများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလတွင် ထိုအစည်း အဝေးသတင်းများ ပေါက်ကြားသဖြင့် အဖွဲချုပ်ဝင်များ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အများအပြားကို နဝတ က ပိုက်စိပ် တိုက်ဖမ်းတော့သည်။ ထိုအဖမ်းခံသူများထဲတွင် ဦးလှသန်းလည်း ပါဝင်သည်။ စုစုပေါင်း ၃၅ ဦးကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂၂(၁) နှင့် ၁၂၄ တို့ဖြင့် တရားစွဲခြင်းခံရသည်။ ၁၉၉၁ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) တွင် စတင်ရုံးတင်တရားစွဲဆို၍ ဧပြီလ (၃ဝ) တွင် စီရင်ချက်ချခဲ့ သည်။ဦးချစ်တင် (မင်းလှ၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦးမြဝင်း (အင်္ဂပူ ၁၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦးလှထွန်း (ကြည့်မြင်တိုင်၊ လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦးထွန်းအောင်(ရေတာရှည် ၂၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦးအောင်ဆန်းမြင့် (မြိုင် ၁၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်)၊ ဦးစောလှိုင် (အင်းတော် ၊လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦးမြင့်ကြည် (ကသာ ၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦးသိန်းထွန်း (သဲ ကုန်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦးရဲထွဋ္ဋ် (ဒိုက်ဦး ၊လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦးခင်မောင်သိန်း(ခင်ဦး ၁၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်)၊ ဦးသောင်းမြင့် (ခင်ဦး ၂ ၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦးသိန်းဖေ (ကန့်ဘလူ ၁ ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဒေါက်တာမြင့် နိုင် (ကန့်ဘလူ ၂ ၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင် (ဝက်လက် ၂ ၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း (အလုံ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဒေါ်စန်းစန်း (ဆိပ်ကမ်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဒေါက်တာ မောင်မောင်လတ် (သာကေတ၊ လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦးကျော်သွင် (ခရမ်း ၁၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦးလှသန်း (ကိုကိုးကျွန်းစု ၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦး သာဆိုင် (တွံတေး ၁ ၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင် (အမရပူရ ၁ ၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦးဘဘွား (အမရပူရ ၂၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဒေါက်တာစိုးလင်း (မန်း အနောက်တောင် ၁၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦးတင်အောင် အောင် (မန်း အနောက်မြောက် ၁၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဒေါ်အုန်းကြည် (မြစ်သား ၁၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဒေါက်တာ ဇော်မြင့် (ဟင်္သာတ ၂၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦးပိုက်ကို (ပခုက္ကူ အဖွဲ့ချုပ်မြို့နယ် စည်း) နှင့် ဒေါ်ဝင်းမေ (စစ်ကိုင်းတိုင်းစည်း)၊ စုစုပေါင်း (၂၈) ဦးမှာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂၂(၁) နိုင်ငံတော်အား သစ္စာဖေါက်ဖျက် ပုန်ကန်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် (၂၅) နှစ်စီ အပြစ်ပေးခံရ သည်။ဦးခင်မောင်ဆွေ (စမ်းချောင်း ၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦးနိုင်းနိုင်း (ပုဇွန်တောင် ၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦးစိန်လှဦး (အင်းစိန် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦးစောနေဒွန်း (အဖွဲ့ချုပ် ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဦးတင်မောင်ဝင်း (စာရေးဆရာ လေးကိုတင်)၊ ဦး ဖေအောင်လင်း နှင့် ဒေါ်ရွှေဝါစိုးတို့ (၇) ဦးမှာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂၄ နိုင်ငံတော်အား သစ္စာဖေါက်ဖျက် ပုန်ကန်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ သတင်းထိန်ချန်မှုအရ ထောင်ဒဏ် (၁ဝ) နှစ်စီ အပြစ်ပေးခံရသည်။ထို ယာယီအစိုးရဖွဲ့စည်းရေး အမှုကိစ္စနှင့် ငြိစွန်းသဖြင့် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်စစ်ဆေးနေစဉ် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုပြင်းထန်သဖြင့် ဦးမောင်ကို (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ဗဟိုအလုပ်သမား ဦးစီးအဖွဲ့) သည် ၁၉၉ဝ နိုဝင်ဘာ (၉) ရက်နေ့တွင် ရေကြည်အိုင် စစ်ထောက်လှမ်း ရေးအချုပ်၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ဦးတင်မောင်ဝင်း (ခရမ်း ၂ ၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်) သည်လည်း ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရပြီးနောက် ဆေးဝါးနှင့် အစားအစာဖြတ်တောက်ခံရ သဖြင့် အင်းစိန်တွဲဖက်ထောင် ကျွန်းတိုက်၌ ဇန်နဝါရီ ၁၈၊ ၁၉၉၁ တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ရသည်။ဦးလှသန်း (ကိုကိုးကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်) သည်လည်း ဆေးဝါးကုသမှု နုံချာညံ့ဖျင်းလှရုံမက၊ လူမဆန်စွာပြုမူ ဆက်ဆံရာ၌ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော အင်းစိန်ထောင်တွင် တခါသုံးဆေးထိုးအပ် မသုံးမှုကြောင့် (HIV/AIDS) ရောဂါကူးစက် ခံရ၍ ၁၉၉၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂) ရက်နေ့အသက် (၅ဝ) မပြည့်မီတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ရသည်။ဦးလှသန်းသည် သူ့ကျန်းမာရေးကို သူ အလွန်ဂရုစိုက်သူ ဖြစ်သည်။ အင်းစိန်ထောင်၊ တိုက် ၄ (အတို) တွင် သူနှင့်အတူ စာရေးသူနေ ခဲ့ဖူးသည်။ မိလ္လာချခွင့်ပေးချိန်၊ ရေချိုးခွင့်ပေးချိန်များတွင် ဦးလှသန်းသည် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းများ အမြဲလိုလို လုပ်လေ့ရှိ သည်။ အခြားသူတို့ကိုလည်း ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ရန်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်ပင် သူက တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တတ်သေးသည်။ စာရေးသူ မှတ်မိသလောက် သဘောမဆိုးသော ထောင်ဝါဒါများက ရေချိုးပြီးနောက် တိုက်ခန်းမပိတ်သေးဘဲ၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခွင့်ပြုလျှင် တိုက်ခန်းနံပတ် (၁၉) တွင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကြမြဲဖြစ်သည်။ ထိုဆွေးနွေးဝိုင်းတွင် ဦးလှသန်း အမြဲထက်ထက်သန်သန် ပါဝင်တတ် သည်ကို မှတ်မိနေသည်။ထိုစဉ်က တိုက်ခန်း (၁၉) တွင် ပြည်သူ့တိုးတက်ရေးပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်များဖြစ်ကြသော ဦးမြစိန် (စာရေးဆ ရာ စိန်မင်း)၊ ဦးလေးမြင့် (စာရေးဆရာလှကွန့်)၊ ဦးဟန်တင့် (ကွယ်လွန်) နှင့် ဦးသောင်းထိုက် (ကွယ်လွန်) တို့ နေကြသည်။ စာရေး သူက အခန်း (၂၃) တွင် ဦးချို (ကျိုက္မရော) နှင့်၎င်း ဦးလှသန်းက အခန်း (၂၇) တွင်ဦးမြဝင်း (အင်္ဂပူ ၁၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်၊ ယခု အမေရိကန်တွင်နေသူ) နှင့်၎င်း နေရသည်။ စကားပြောခွင့်အချိန်ကလေးရတိုင်း အခန်း (၁၉) စကားဝိုင်းတွင် ဦးလှသန်းကို ပုံမှန် တွေ့ရတတ်သည်။ ထို့ပြင် ဦးလှထွန်း (ကြည့်မြင်တိုင်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဒေါက်တာ မောင်မောင်လတ် (သာကေတ၊ လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ကွယ်လွန်)၊ ဦးကျော်သွင် (ခရမ်း ၁ ၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ယခု နော်ဝေ)၊ ကျောင်းသားများဖြစ်ကြသော ကို တင့်ဆန်း(ရကသ)၊ ကိုပြုံးချို (ရကသ)၊ ကိုယဉ်ထွေး (လူ့ဘောင်သစ်၊ယခု နော်ဝေ)၊ ကိုဝင်းသိန်းနှင့် ကိုစိန်လှိုင် (သုံးရောင်ခြယ်) တို့ လည်း (၄) တို တိုက်မှာပင်ရှိနေကြသည်။ (၁၉၉၃-၉၄) ကာလဖြစ်၍ ထိုစဉ်က နိုင်ငံရေးတိုက်ဝင်းများတွင် လွှမ်းမိုးနေသောအ ကြောင်းအရာမှာ အမျိုးသားညီလာခံ တက်သင့်၊ မတက်သင့် ကိစ္စပင်ဖြစ်သည်။ ညီလာခံက ချမှတ်လိုက်သော အခြေခံမူ (၆) ချက် အ နက်၊ (အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍတွင် တပ်မတော်က ပါဝင်ထမ်းဆောင်ရေး) ဆိုသည့် နံပတ် (၆) အချက်ကို လက် ခံသင့် မသင့်ဆိုသော ပြဿနာက အဓိက အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ဦးလှသန်းသည် တပ်မတော် (ရေ) တွင် ၁၂ နှစ်မျှ စစ်မှုထမ်းခဲ့ဖူးသူဖြစ်သော်လည်း ထိုကိစ္စကို စဉ်းစားရာ၌ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များကဲ့ သို့တွေဝေမှုမရှိ။ သူက တပ်မတော်သည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၏ စီမံကွက်ကဲမှုအောက်၌ သာရှိရမည်ဟု ယူဆသူဖြစ်သည်။ ဦးလှ သန်းသည် တက္ကသိုလ်တွင် ဥပဒေပညာသင်ယူစဉ်က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘာသာရပ်ကို လေ့လောသင်ယူခဲ့ရသူဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် တိုက်ခန်းနံပတ် (၁၉) နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဝိုင်းများ၌ ဥပဒေဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များဆိုလျှင် သူက ဒိုင်ခံရှင်းပြတတ်သည်။ အဖွဲ့ချုပ် တွင် တာဝန်ရှိသူဖြစ်လာသောအခါ သူသည် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပိုမိုဖတ်ရှုလေ့လာဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောပြဖူးသည်။ လွတ်လပ်ရေးအတွက် တက်သုတ်ရိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသဖြင့် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် အားနည်းချက်များရှိခဲ့ကြောင်း သူက ဝေဖန်ပြဖူးသည်။ အဓိကအားနည်းချက်မှာ တိုင်းရင်းသားများအား တန်းတူအခွင့်အရေးပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့မှုဖြစ်ကြောင်း သူက ထောက်ပြဖူးသည်။ တာဝန်ရှိသည့် ဖဆပလ ခေါင်းဆောင်များက ထိုအားနည်းချက်များကို အချိန်မီ မပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့သည့်အပြင်၊ မိမိတို့ အုပ်စု အာဏာမြဲရေးကို အာရုံစိုက်နေခဲ့သဖြင့် တိုင်းပြည်ဖရိုဖရဲဖြစ်ရသည်ဟူသော သူ့ဝေဖန်ချက်ကို မှတ်မိနေသေးသည်။ဦးမြစိန် (စာရေးဆရာ စိန်မင်း) က ထိုစဉ်က အကြောင်းများကို ပြန်ပြောဖြစ်တိုင်း ဦးလှသန်းသည် သူ အထူးလေးစားသူများအနက် တွင် တဦးဖြစ်ကြောင်း ပြောပြတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တဦးအနေဖြင့် ပြည်သူဘက်က ရပ်ရမည်၊ ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရမည်ဆိုသည်ကို ကောင်းစွာသိရှိသူ၊ နိုင်ငံရေးအမြင် ရှင်းလင်းသူဟု ဦးမြစိန်က ဦးလှသန်းအပေါ် မှတ်ချက်ပေးဖူးသည်။တိုက်ပိတ်ခံထားရသည့် အချိန်များတွင် ဦးလှသန်းသည် ပလပ်စတစ်လက်ဆွဲအိပ်များ ထိုးခြင်းဖြင့် ငြီးငွေ့ဖွယ်အချိန်များကို ကျော်ဖြတ် လေ့ရှိသည်။ မိသားစုများ ထောင်ဝင်စာလာတွေ့သည့်အခါ ငါးပိကျော် ငါးခြောက်ကျော်အစရှိသည့် စားသောက်စရာများကို ပလပ်စ တစ်အိပ်များဖြင့် ထည့်ပေးလေ့ရှိသည်။ ထိုပလပ်စတစ်အိပ်များကို သန့်စင်အောင်ဆေးကြော၍ ဝှက်ထားရသည့် ဘလိတ်ဓါး တခြမ်း ပဲ့လေးဖြင့် ညီညီညာညာ စိပ်ဖြာရသည်။ ပြီးမှ စိပ်ဖြာထားသော ပလပ်စတစ်ပြားကလေးများကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရာဂဏန်းများစွာ ရရှိအောင် နန်းဆွဲရသည်။ ထို ပလပ်စတစ် နန်းကြိုးများကို အသုံးပြု၍၊ ဒီဇိုင်းလက်ရာမြောက်သည့် လက်ဆွဲအိပ်များထိုးခြင်း ဖြစ် သည်။ ဦးလှသန်း၏ လက်ရာ လက်ဆွဲအိပ်များမှာ မည်ကာမတ္တ အဖြစ်မျှထိုးယက်ထားခြင်း မဟုတ်ပေ။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်း ကောင်း အရောင်အစပ်အဟပ်ညီညီဖြင့် ဒီဇိုင်းလှလှ အိပ်ကလေးများဖြစ်လာအောင် ထိုးထားခြင်းဖြစ်သည်။ဤသည်ကို ကြည့်၍ ဦးလှသန်းတွင် အနုလက်မှုပညာ၌လည်း ထူးချွန်သည့်အရည်အချင်းများ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းများရှိနေ သည်ကို သိရသည်။ ထိုသို့သူကိုယ်တိုင် လုပ်သည့် လက်မှုပညာ ပစ္စည်းကလေးများဖြင့် အပြင်မှ မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေများကို လက် ဆောင်ပေးတတ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ပြင်ပမှ မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟများ၏ မေတ္တာစေတနာ စာနာထောက်ခံမှုတို့ကို သူ့ လက်မှုပညာ လက်ရာကလေးများနှင့် မေတ္တာတုန့်ပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ့လက်ရာ တခုပြီးတိုင်းလည်း ရဲဘော်ရဲဘက်များကိုပြ၍ လို အပ်ချက်ရှိ မရှိ ဝေဖန်ခိုင်းတတ်သည်။ အခြား အိပ်ထိုးလိုသူများကိုလည်း သူက အိပ်ထိုးနည်း သင်ပေးတတ်သေးသည်။ (၄) တို တိုက်တွင် သူနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရင်း ဦးလှသန်းသည် စိတ်နေစိတ်ထား နုညံ့ပျော့ပျောင်းသူ၊ အနုပညာစိတ်ရှိသူ၊ လူသားဆန်သူဖြစ် ကြောင်း ပိုမိုနားလည်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၄ ဧပြီလတွင် စာရေးသူ (၅) တိုက်သို့ပြောင်းရသောအခါသူနှင့် အဆက်ပြတ်သွားသည်။ သို့ သော် ထောင်ဝင်စာထွက်သည့်အခါ အမှတ်မထင် တွေ့ဖြစ်နှုတ်ဆက်ဖြစ်ခြင်းမျိုးတော့ ရှိသည်။ ထိုနှစ် အောက်တိုဘာလောက်တွင် စာရေးသူ (၃) တိုက်သို့ပြောင်းရပြန်သည်။ ဦးလှသန်းကတော့ (၄) တို တိုက်မှာပင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။(၃) တိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ တာဝန်ယူပြုစုသည့် ထောင်တွင်းလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု အစီရင်ခံစာတွင် လူတရာကျော် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ကုလသမဂ္ဂသို့လျှို့ဝှက်ပေးပို့စဉ်က ဦးလှသန်း၏ လက်မှတ်လည်းပါဝင်ခဲ့သည်။ သူ ညနေတိုင်းဖျားသဖြင့် ဆေး ထိုး ဆေးသောက်နေရကြောင်း သတင်းကြားရသည်။ သူ့အဖျားကို ငှက်ဖျားဆိုကာ ထောင်ဆေးမှူးက ဆေးထိုးပေးနေသည်မှာ လချီ ၍ကြာသည်။ နောက် မပျောက်တော့မှ သလိပ်စစ်ရာ၊ တီဗီ အဆုတ်ရောဂါဟုဆိုကာ ဆေးပြောင်းထိုးပြန်သည်။ အင်းစိန်အကျဉ်း ထောင် ကို ၁၈၆၅ ခုနှစ်ခန့်က ဆောက်လုပ်သည်။ ဗြိတိသျှကိုလိုခေတ်၊ ဖဆပလခေတ်၊ မဆလခေတ်၊ နဝတခေတ် အဆက်ဆက် နှစ်တရာကျော် လူပေါင်းမရေမတွက်နိုင်အောင် အကျဉ်းချထားခဲ့သဖြင့် ရောဂါဘယပိုးမွှားအစုံ ခိုအောင်းနေပေသည်။ ထို့ကြောင့် မူလ က ကျန်းကျန်းမာမာရှိသော ဦးလှသန်းမှာ ရောဂါကူးစက်ခံရပုံရသည်။ လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းသော ရိက္ခာကို မမှီဝဲရ၊ သန့်ရှင်းသည့်ရေမ သောက်ရ၊ လေကောင်းလေသန့်မရှူရှိုက်ရ၊ နေရောင်ခြည်အလုံအလောက်မရရှိဘဲ၊ တိုက်ပိတ်ခံထားရခြင်းကြောင့် ရောဂါကူးစက်ရန် အလွန်လွယ်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ မကျန်းမာသည့်အခါ သန့်ရှင်းသည့် တခါသုံးဆေးထိုးအပ်ဖြင့် မဟုတ်ဘဲ၊ ပြီးစလွယ် ကြုံရာအပ်ဖြင့် ဆေးထိုးခံရခြင်းဖြစ်သည်။ အရက်ပြန်ကိုပင် ကျကျနန အသုံးပြုခြင်းမရှိ။ သက်ဆိုင်ရာအိမ်များက ခက်ခက်ခဲခဲ တခါ သုံးအပ် ပို့ပေးသော်လည်း ကိုယ့်အပ်ကို သိမ်းထားခွင့်မရှိ၊ သူတို့ထံ၌သာ ပေးအပ်ထားရသည်။ တကယ်ဆေးထိုးသည့်အခါ ကိုယ်အပ် နှင့်ကိုယ်သုံးရခြင်းဟုတ် မဟုတ် စိစစ်ရန်မလွယ်။ သို့ဖြင့် ဦးလှသန်းမှာ နောက်ဆုံးအိပ်ယာတွင်လဲကာ ဆေးရုံတင်ရသည်အထိ ဖြစ်ရ တော့သည်။ ဆေးရုံတွင် စစ်ဆေးချိန်ကျမှ သူ့တွင် (HIV/AIDS) ရောဂါကူးစက်ခံနေရသည်ကို သိရတော့သည်။ထောင်တွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုအစီရင်ခံစာ အပြင်သို့ရောက်သွားခဲ့သဖြင့် ၁၉၉၅ အောက်တိုဘာလထဲတွင် အင်းစိန်ထောင် နိုင်ငံရေးတိုက်ဝင်းအတွင်း စစ်ထောက်လှမ်းရေးက ဝင်ရောက်စီးနင်းရှာဖွေခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအများအပြား အမှောင် တိုက်ပိတ် ခံကြရသည်။ ကြမ်းတမ်းစွာ စစ်ကြောမေးမြန်းခံကြရသည်။ ဆရာဦးဝင်းတင်၊ ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင် (အမရပူရ ၁၊ လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဒေါက်တာမြင့်နိုင် (ကန့်ဘလူ ၂၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ဦးနိုင်းနိုင်း (ပုဇွန်တောင်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်)၊ ဒေါက်တာခင်ဇော်ဝင်း၊ မျိုးမြင့်ငြိမ်း၊ ကိုထွန်းဝင်း(မင်းဗျားစီးနင်းမှု) နှင့် စာရေးသူတို့မှာ စစ်ခွေးတိုက်တွင် တိုက်ပိတ်ခံရသည်၊ထိုကာလတွင် ဦးလှသန်းသည် (HIV/AIDS) ရောဂါကူးစက်ခံရ၍ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး မြေအောက်အချုပ်ခန်း၌ ရောက်ရှိနေသည်။ ဆေးရုံတင်ထားသော်လည်း စနစ်တကျ ဆေးဝါးကုသမှု ရရှိသည်မဟုတ်။ ဦးလှသန်းသည် ယုံကြည်ချက်အလွန် ခိုင်မာသူဖြစ်သည်ဟု သူနှင့်အတူ ဆေးရုံအချုပ်ခန်းတွင် အတူနေခဲ့ဖူးသည့် ခရမ်းရဲစခန်းမှ ရဲတပ်သားတဦး (အမည် မမှတ်မိ) က ပြန်ပြောပြသည်။ ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ ဘာကြောင့် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရသည်ဆိုခြင်းကို ဦးလှသန်းက ဆေးရုံအချုပ်တွင် မမောနိုင် မပန်းနိုင်ရှင်းပြတတ်ပုံ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အကြောင်း၊ အမျိုးသားညီလာခံကို ဘာကြောင့် အတုအယောင်ဟု ဆိုနိုင်ကြောင်း၊ စသည်တို့ကိုလည်း သူတို့အား ဦးလှသန်းကရှင်းပြပုံတို့ကို ထို ရဲသားဟောင်း လူငယ်က ပြောပြခဲ့သည်။ ရဲအထူးသ တင်းတပ်ဖွဲ့နှင့် စစ်ထောက်လှမ်းရေးဘက်မှ ပုဂ္ဂိုလ်များ နေ့စဉ်လာ၍ ဦးလှသန်းအား နိုင်ငံရေးမလုပ်တော့ရန်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ရန် လာပြောကြသည်ကိုတွေ့ရပြီး၊ ဦးလှသန်းက လုံးဝမနှုတ်ထွက်နိုင်ဟု ငြင်းဆိုခဲ့ပုံတို့ကိုလည်း ထိုလူငယ်က ပင် ပြောပြခဲ့သည်။နောက်ဆုံးတွင် စစ်ထောက်လှမ်းရေးက ဦးလှသန်းအတွက် လိုအပ်သည့်ဆေးများကို နိုင်ငံခြားမှ မှာထားကြောင်း၊ ဦးလှသန်း အနေ ဖြင့် နိုင်ငံရေးမှ နှုတ်ထွက်မှသာ ထိုဆေးဝါးများဖြင့် ကုသပေးမည်ဖြစ်သည်ဟု အကြပ်ကိုင်ခဲ့ပုံကိုလည်း ထိုလူငယ်က ပြောပြခဲ့သည်။ ဦးလှသန်းက ဆေးကုသမှု မပေးလိုလျှင်လည်း ရှိစေ၊ သူ့အနေဖြင့် လူထုက အပ်နှင်းထားသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ လုံးဝ နှုတ်ထွက်မည် မဟုတ်၊ အသေသာခံ သွားမည်ဟု ခိုင်ခိုင်မာမာ တုန့်ပြန်ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ လူငယ်မှတဆင့် ပြန်ကြားခဲ့ရသည်။ ဦးလှသန်းကား သူ့သန္နိဋ္ဌာန်နှင့်အညီ ယုံကြည်ချက်ကို မစွန့်လွှတ်ခဲ့။ သူ၏ နောက်ဆုံးအချိန်များကို တည်ငြိမ်စွာရင်ဆိုင်သွားခဲ့သည်။ အာဏာရှင်စနစ်၏ လူမဆန်မှုကြောင့် ထောင်တွင်း၌ သူ ရောဂါရခဲ့ရသည်။ အာဏာရှင်စနစ်၏ လူမဆန်မှုကြောင့် သူ ဆေးဝါးကုသ ခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၆ သြဂုတ် (၂) ရက်နေ့၌ အာဏာရှင်စနစ်က ဦးလှသန်းအား လူမဆန်စွာ သတ်ဖြတ်လိုက်သည်။ သို့သော် လည်း သူ၏ သန္နိဋ္ဌာန်နှင့် ယုံကြည်ချက်ကိုကား အာဏာရှင်တို့သေအောင် မသတ်နိုင်ခဲ့။ဦးလှသန်းကား သူ့ပခုံးထက်သို့ကျရောက်လာသော သမိုင်းရေးတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းရွက်သွားခဲ့သည်။ သူ့နာမည်ကား နိုင်ငံ့ သားကောင်းအဖြစ် သမိုင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင် ကမ္ပည်းတင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ။ သူကား မမေ့အပ်သည့် နိုင်ငံ့သားကောင်းများအနက်မှ တဦး ဖြစ်သည်။ ကိုးကား … (၁) ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှတ်တမ်း - မြန်မာ့အလင်း အောင်သန်း(၂) ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှတ်တမ်း - ဦးခင်ကျော်ဟန် (ရေနံချောင်းမြို့နယ် အမှတ်(၂) ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်)၊(၃) Letters from Burma – Aung San Suu Kyi ဇင်လင်း Photo by..http://www.flickr.com http://www.naytthit.com/ShortStory/2010/july10/zl-july31.html
7/31/2010ဖမ်းဆီးချိန်မှ စတင်ပြီး အစားအသောက် သုံးဆောင်ရန် ငြင်းပယ်နေသဖြင့် ရခိုင်သမိုင်း သုတေသီ အရှင်ပညာစာရ၏ အခြေအနေမှာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။အမည်မဖေါ်လိုသူ လူကြီး တဦးက “ ဆရာတော်ရဲ့ အခြေအနေက စိုးရိမ်ရတဲ့ အနေအထားကို ရောက်ရှိနေတယ်လို့ အတွင်း သတင်းအရ သိရပါတယ်။ အခု ဆရာတော်ဟာ အစားအစာ မသုံး ဆောင်တာ ၅ ရက်ခန့် ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အားအင်တွေ အထူး ကုန်ခန်းနေပြီး အသက် အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အထိ အခြေအနေ ဆိုးရွားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။ဆရာတော် အရှင် ပညာစာရအား နအဖ စစ်အာဏာပိုင်များက စွဲချက် အမျိုးမျိုးဖြင့် လွန်ခဲ့သော ဇူလိူင်လ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ဆရာတော် သတင်းသုံးနေရာ စစ်တွေ အာကျိတ်တောင် ကုန်းရှိ မဟာမုနိ ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရမှ ဒုတိုင်းမှူး တင်လိူင်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ဖမ်းဆီးခံရသည့် အချိန်မှ စတင်ပြီး ဆရာတော်မှာ အစားအသောက် သုံးဆောင်ရန် ငြင်းပယ် နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သူက ပြောသည်။“ ဆရာတော်ကို အ၀တ်တထည် ကိုယ်တခုနဲ့ ပစ်ထားပြီး ဆဲဆိုတာတွေ ရိုက်နက်တာတွေ ရှိတယ်လို့လည်း ကြားရပါတယ်။ အမျိုးမျိုးစွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ ကိုယ်ထိ လက်ရောက်စော်ကြားပြီး အကြိမ်ကြိမ် စစ်ဆေးမေးမြန်းမူတွေ ပြုလုပ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ ဘာမှ ပြန်မပြောတဲ့ အပြင် အစားအသောက် သုံးဆောင်ရန်လည်း ငြင်းပယ်ထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။”ဆရာတော် အရှင် ပညာစာရအား ဖမ်းဆီးစဉ်က ပြည်နယ်၊ မြို့နယ် အဆင့် သံဃာ့ မဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများ၏ ခွင့်ပြုချက်ကို မယူသည့် အပြင် ဖမ်းဆီးရာတွင်လည်း သမရိုးကျ မဟုတ်ဘဲ ဒုတိုင်းမှူး ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင် ဖမ်းဆီးသဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရခြင်း နောက်ကွယ်တွင် လျို့ဝှက် နက်နဲသော အခြေအနေများ ရှိနိုင်ကြောင်း စစ်တွေတွင် လေ့လာသုံးသပ်သူများက ပြောဆို နေကြသည်။၎င်းပြင် စစ်အာဏာပိုင်များသည် ဆရာတော်အား ဖမ်းဆီးပြီးနောက် ဆရာတော် စာကြည့်တိုက်မှ ဆရာတော် နှစ်ပေါင်းများစွာ စုဆောင်း သိမ်းဆည်းထားသော ရှေးဟောင်း ရခိုင်ယဉ်ကျေးမူ အမွေအနှစ် ပစ္စည်း မြောက်မြားစွာကို သိမ်းဆည်း ယူဆောင် သွားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ထိုအထဲတွင် ရခိုင်ရှေးဟောင်း ရွှေဒင်္ဂါး၊ ငွေဒင်္ဂါးများ၊ ရှေးဟောင်း ဘုရားများ၊ ပေစာ- ပရပိုက်စာ အပါအ၀င် တန်ဖိုးရှိ ပစ္စည်းများအားလုံးကို တစုံတရာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ မပြုစုဘဲ အားလုံးကို သိမ်းကျုံး ယူငင်သွားခဲ့သည်။၎င်းပြင် ဆရာတော်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တမင် သိက္ခာကျစေရန် သတင်းမျိုးစုံကို လူထု အကြားတွင် ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိဖြင့် ဖြန့်ဖြူးနေကြောင်း သိရသည်။စစ်တွေမှ အမျိုးသမီး တဦးကလည်း “ ခုဒီသတင်းက စစ်တွေမှာ လူပြောအများဆုံး သတင်း တခု ဖြစ်နေပါတယ်။ ဆရာတော်မှာ မိန်းမရှိတယ်။ ကလေးတွေကို သတ်ပီး မြုပ်ထားတယ်။ ငွေတွေကို ကိုယ်ကျိုးအတွက် သုံးတယ်။ နိုင်ငံခြားဒေါ်လာတွေ ရတယ်။ နိုင်ငံရေး လုပ်တယ်။ မျိုးစုံပါဘဲ။ ဘယ်သူမှ တိတိကျကျ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ခုလို စွပ်စွဲတဲ့ အပေါ် ယုံတဲ့ လူတွေရှိသလို မယုံကြည်တဲ့ လူတွေလည်း ရှိပါတယ်။” ဟု ပြောသည်။ဆရာတော်အား တိုင်းတန်းရာတွင် မာဇေဒါ အန်ဂျီအိုမှ ဦးအောင်ဝင်းကျော်နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် နေထိုင်နေသည့် မမာလာဆိုသည့် အမျိုးသမီးတို့ ပါဝင်ပြီး တိုင်ကြားသည်နှင့် တစုံတရာ စစ်ဆေး မေးမြန်းမူများ မရှိဘဲ စစ်အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခဲ့သဖြင့် ယခု ဖမ်းဆီးမူအပေါ် တမင်အကွက်ချ စီစဉ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း လေ့လာသူများက သုံးသပ် ပြောဆိုသည်။ http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=2643
ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းဆုံ မီးပွိုင့်တွင် သစ်လုံးတင်ယာဉ်တစ်စီးပေါ်မှ သစ်လုံးကြီးများ ပြုတ်ကျမှု ဖြစ်ပွား ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းဆုံ မီးပွိုင့်တွင် သစ်လုံးတင်ယာဉ် တစ်စီးပေါ်မှ သစ်လုံးကြီးများ ပြုတ်ကျမှု ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားမှုမှာ နံနက် ၁၁ နာရီခွဲ အချိန်ခန့်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယာဉ်ပေါ်တွင် တင်ဆောင်လာသော သစ်လုံးများကို ချည်နှောင်ထားသည့် သံကြိုးများ ပြတ်သွား၍ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သစ်လုံးကြီးများ ပြုတ်ကျမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူ မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါယာဉ်မှာ ချောင်းဝမှ သီလ၀ါသို့ သွားနေစဉ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းမှ မဟာဗန္ဓုလလမ်း ဘက်သို့ အကွေ့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ "ကျွန်တော် အဲဒီအချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားဖို့ လမ်းကူးနေတဲ့အချိန်မှာ သစ်လုံးတင်ယာဉ်ကြီးက မဟာဗန္ဓုလ လမ်းဘက်ကို ကွေ့တဲ့အချိန်မှာ သစ်လုံးတွေကို ချည်ထားတဲ့ သံကြိုးတွေ ပြတ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ သိပ် မကြာဘူး။ သံထောက်တွေကလည်း ပြုတ်ထွက်ပြီးတော့ သစ်လုံးတွေ ပြုတ်ကျတာပါပဲ။ သစ်လုံးအားလုံးက ကိုးလုံးရှိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဖြတ်သွားနေတဲ့ ကားတွေကော၊ လူတွေကော မရှိလို့ တော်သေးတာပေါ့။ အခုလိုမျိုး သစ်လုံးတင်ယာဉ် ပေါ်ကနေ သစ်လုံးတွေ ပြုတ်ကျတာတွေ၊ တိမ်းမှောက်တာတွေကြောင့် သေဆုံး၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ယခင်က ရှိခဲ့ပါတယ်"ဟု အခင်းဖြစ်စဉ်နှင့် အနီးဝန်းကျင်တွင် ရှိနေခဲ့သူတစ်ဦးက ဆိုပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖြတ်သန်းသွားလာလျက်ရှိသည့် သစ်လုံးတင် ယာဉ်ကြီးများတွင် သံကြိုးလေးချောင်း တပ်ဆင်ပြီးမှသာ မောင်းနှင်ရန်နှင့် သံကြိုးများ ခိုင်ခံ့မှုရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးရန်အတွက်လည်း ရန်ကုန်တိုင်း ယာဉ်စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီက သတိပေးညွှန်ကြားထားကြောင်းလည်း သိရသည်။ http://www.news-eleven.com
`သစ္စာ´အမျိုးသားရေးအတွက်အသက်ပေးသွားသောရဲဘော်များအားတိုင်တည်သစ္စာပြုပါ၏။မပြီးပြတ်သေး တော်လှန်ရေးတွင်ကျွန်ုပ်၏သွေးမနီသေးလျှင်အသင်တို့သွေး ပတ်ဖျန်းပေး၍ရဲဆေးတင်ပေးကြပါလေ။မပြီးပြတ်သေး တော်လှန်ရေးတွင်ကျွန်ုပ်ဝိဥာဉ် ကြောက်စိတ်ဝင်၍မချင့်မရဲ သတ္တိနည်းလျှင်သင်တို့ဝိဥာဉ် ပူးကပ်ဝင်၍ကျွန်ုပ်အားထိန်းချုပ်သွားပါလေ။မပြီးပြတ်သေးတော်လှန်ရေးတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကားအမျိုးဂုဏ်မောက် သစ္စာဖောက်ဟုမထောက်မညှာ ပြုမိပါလျှင်အသင်တို့၏ မညွတ်ပြောင်းသောခွပ်ဒေါင်းလက်ဖြင့်ဝိုင်းညှပ်အပြစ်ပေးကြပါလေ။မပြီးပြတ်သေး တော်လှန်ရေးအတွက်ကျွန်ုပ်အသက် လမ်းတ၀က်မှပေးဆက်ရလည်းလူ့ဘုံလမ်းခွဲ ၀မ်းမနည်းဘဲတာဝန်တရပ်ကျေပြွန်မှန်၍ထပ်ဆင့်ပျော်ဝင် ကျွန်ုပ်ဝိဥာဉ်သည်ဒေါင်းအလံကိုဆွဲ လေတွင်ဝဲ၍သင်တို့ရှိရာ ကျွန်ုပ်လာမည်ရင်ဖွင့်ကြိုကြပါလေ။ သူငယ်ချင်း သွားနှင့် သူငယ်ချင်း ကြယ်အစင်းစင်း ကြွေတဲ့ ဟောဒီကမ္ဘာမြေရဲ့အနာတရတွေကို စွမ်းသမျှ ကုစားဖို့ ငါတို့ နေရစ်ခဲ့ဦးမယ်။ သွားနှင့် သူငယ်ချင်း နေအစင်းစင်းပူတဲ့ ကမ္ဘာမြေရဲ့ ဒဏ်ရာတွေကိုလက်ဖဝါးတွေနဲ့ ကာကွယ်ဖို့ ငါတို့ နေရစ်ခဲ့ဦးမယ်။(၂၀ဝ၇ ဩဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့က တာရာမင်းဝေရဲ့ ဈာပနမှာ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ကိုယ်စား မင်းကိုနိုင် ရေးဖွဲ့ ရွတ်ဆိုတဲ့ကဗျာ)http://university-freedom.blogspot.com/2010/07/blog-post_31.html
100730 Bty Bur Than Shwe လေးစားစွာဖြင့် http://www.flyingpeacock.blogspot.com/
သို့ ..............................................မနေ့ညကပဲအိပ်ယာတစ်ခုတည်းမှာမျက်လုံးအတူတူမှိတ်ခဲ့ကြသေးတယ် အခုတော့ငါတို့မြို့လေးမှာမင်းရယ်သံမရှိတော့ တွန့်ကြေနေတဲ့တိမ်တိုက်တွေလိုမျိုး အမှန်တရားကိုအိပ်မက်မက်ဖို့ဆိုပြီးအမှားတွေဆီမင်းလစ်သွားတော့ ငါတို့မြို့လေးမှာညနေစောင်းတိုင်းမင်းသောက်ဖို့ လေးပတ်ပြားသစ္စာတရားတစ်ချို့ မျှော်လင့်ချင်းအစိုင်အခဲလေးတွေထည့်စိမ်ထားတုန်း မနက်လင်းတိုင်းအထူးဘစ်(စ)ကားကို အထူးတိုးစီးနေရတုန်း ပါးကိုက်ရင်နားရိုက်ကြတုန်း အင်တာနက်ဆိုင်မှာဖိနပ်တွေပျောက်ကြတုန်း ခိုးကူးခွေတွေတစ်ခွေ ၂၀၀နဲ့ရတုန်း ကားမီးနဲ့ထိုးရင်လက်နဲ့မကာဘဲ မျက်နှာမှာလိမ်းထားတဲ့မိတ်ကပ် ပါးပါးနဲ့ကာနေကြတုန်း ကော်ပီ သီချင်းတွေအောင်မြင်နေတုန်း ရပ်ကွက်ထဲသွားရင်ကို ၀ ကြီးကိုသတိရမိသလို စာရေးပါ စာပြန်ပါ အွန်လိုင်းပေါ်တက်ပါ အရင်လိုအားရပါးရ ရယ်ပါ အနာဂါတ်ငါတို့မြို့လေးမှာ ပန်းတွေစိုက်ပြမယ်ဆိုပြီး မင်းအိပ်မက်တွေမျှားသွားလိုက်တာ ငါတို့မြို့လေးမှာ အခုထိ မင်းရယ်သံမရှိတော့။ သိုး (၇ . ၃၁ . ၂၀၁၀ )
စီးပွားရေး အချက်အချာကျရာ ရန်ကုန်မြို့ အနီးတွင် တပ်ကို တပ်က ပြန်ဝိုင်းထား July 31, 2010 Freedom News Group ရန်ကုန် တိုင်း လှည်းကူး မြို့ နယ် အတွင်း ရှိတပ်မ ၁၁ လက်အောက်ခံ ရဲမွန် တပ်မြို့ ကို သောကြာနေ့ ညနေ က စပြီး ရန်ကုန် တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်လက်အောက် ခံတပ် များ ၊နေပြည်တော် မှ တပ်များ နဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ ဝင်များကထပ်မံ ပိတ်ဆို့ ဝန်းရံထား တယ် လို့ သတင်းရရှိပါတယ် ။ အခုလို ပိတ်ဆို့ ရတဲ့ အဓိက အကြောင်း အရင်းက တော့ရဲမွန် တပ်မြို့ က စစ်သားတွေ ရဲ့လစာတွေထဲကနေ ဖြတ်တောက် လစဉ် ဖြတ်တောက် ယူထားတဲ့ ဘဏ်စုငွေ တွေ ကြောင့် လို့ ရဲမွန် တပ်မြို့ နဲ့ နီးစပ် သူ တစ်ဦး က Freedom News Group ကို ပြောပါတယ်။ ရဲမွန် တပ်မြို့ တွင်း မှာ စစ်သည် အင်အားတစ်ထောင် ကျော် နဲ့ မိသားစု ၀င် တွေ ရှိပြီး အပြင်က ၀ိုင်းထားတဲ့ တပ် အင်အားက တော့ ခြောက်ရာလောက်ရှိ ပါတယ်။ ရဲမွန် တပ်မြို့ တွင်း ကို ဆက်သွယ် နိုင်တဲ့ တယ်လီဖုန်း လိုင်းတွေ ကို ဖြတ်တောက် ထားပြီး တပ်အပြင်ရောက်လို့ပြန်လာတဲ့ မိသားစု တွေ ကို ၀ိုင်းထား တဲ့ တပ်တွေ က ပြန်ပေးဆွဲ ထား သလို့ လုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ၀ိုင်းထား တပ် ကတော့ လက်နက်ချပြီး သတ်မှတ် နေရာ ကို ထွက် လာဖို့၄၈နာရီ အချိန်ပေးထားတယ် လို့ သိရပါတယ်။ ရဲမွန် တပ်မြို့ က တပ်သား တွေ က တော့ ၎င်း တို့ ရဲ့ အထက်အရာရှိ အမိန့် ကိုလုံးဝ မနာ ခံတော့ တာ သီတင်းနှစ်ပတ် လောက်ရှိ သွားပြီ လို့အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှုးကြီး တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ရဲမွန် တပ်ဟာ ရန်ကုန် မြို့ ရဲ့လုံခြုံရေး ကို ယူပေးရတဲ့ တပ် ဖြစ်ပြီး ယခင်က နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများ ကို ခေတ္တဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း စဉ် မှာ အသုံးပြုတဲ့ နေရာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်အခုလို ပိတ်ဆို့ ထားမှု ကြောင့် တပ်တွင်း မိသားစု တွေ နဲ့တက္ကသိုလ် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမယ် ကျောင်းသားတွေတွေ ဒုက္ခရောက်ကြတယ် လို့ သိရပါတယ်။ နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင် တွေ က ချမ်းသာပြီး ရင်း ချမ်းသာ ချိန်မှာ အောက်ခြေတပ်သား တွေ ကတော့ဆင်းရဲတွင်း နက်ကာ ဒုက္ခပင်လယ်ထဲက ရုန်းမထွက် နိုင်ဘူး လို့တပ်မှုးဟောင်း တစ်ဦးက သူ့ ရဲ့ အမြင်ကို ပြောပါတယ်။ Summary only...
"အတိတ်သမိုင်းပြန်လှန်တဲ့အခါဆင်ခြင်စရာ" လူထုစိန်ဝင်းနွယ်နီမဂ္ဂဇင်းအတွဲ(၂၀)အမှတ်(၃)ဇူလှိုင်လ၂၀၁၀ခုနှစ် ဒီတနှစ်လောက်အတွင်းဂျာနယ်တွေဖတ်ကောင်းလာတယ်။အရင်ကလိုအရည်မရအဖတ်မရ ဖျော်ဖြေရေးသတင်းတွေအစား နိုင်ငံရေးအကြောင်းဒီမိုကရေစီအကြောင်း၊ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း၊ သတင်းဆောင်းပါးတွေသူ့ ထက်ငါ ပြိုင်သထက်ပြိုင်အောင် ဖေါ်ပြလာကြတယ်။ယောင်ဝါးဝါးအသိ ဒီလိုဖေါ်ပြလာကြတာလူကြီးပိုင်းအတွက်လဲကောင်းတယ်။မကြားရ၊မပြောရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ စကားတွေကို အားရပါးရဖတ်ပြီး အားရပါးရစားမြုံ့ ပြန်နိုင်ကြတယ်။လူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်လဲအများကြီးကောင်းတယ်။ အဆက်ပြတ်နေတဲ့ခေတ်အကြောင်းတွေကိုသိကြရတယ်။ဂျာနယ်တွေကိုကျေးဇူးတင်မိတယ်။လူငယ်လူရွယ်တွေသာမကဘူးအခုချိန်မှာ အသက်(၅၀)တန်းအောင်ရောက်နေသူတွေတောင် ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းကိုသေသေချာချာမှန်မှန်ကန်ကန်သိကြာတာမဟုတ်ဘူး၊ယောင်ဝါးဝါးလောက်သာသိကြတာ။ အတိတ်သမိုင်းကိုမသိတဲ့အခါကျတော့အခုပစ္စုပ္ပန်မှာရွေးကောက်ပွဲတို့ ဒီမီုကရေစီတို့ အကြောင်းတွေကို ကြားရတဲ့အခါမှာဟိုလူပြောလဲဟုတ်နိုးနိုးဒီလူပြောလဲဟုတ်နိုးနိုးနဲ့ ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်ကြနေကြရတယ်။ကိုယ်တိုင်တိတိကျကျ ဘာမှဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိကြဘူး။ တအံ့တသြဖြစ်ကြ ဂျာနယ်လစ်တွေ ပြန်ပြီးဖေါ်ပြနေကြတဲ့ အတိတ်သမိုင်းကြောင်းတွေ ဖတ်ပြီး တချို့ ဆိုရင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကို ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်နေကြတာတွေ့ ရတယ်။ကာတွန်းတွေတွေ့ ပြန်တော့လည်းဒီလိုသရော်လို့ ရသလား၊ဒီလိုလှောင်လို့ ရသလားနဲ့ တအံ့တသြဖြစ်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့်ဂျာနယ်တွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြောခဲ့တာ။ဒါပေမယ့်ဘ၀င်မကျသဘောမတူနိုင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဂျာနယ်တွေကပြန်လည်ဖေါ်ပြတဲ့အတိတ်ဖြစ်ရပ်တွေထဲမှာအများစုကနိုင်ငံရေးသမားအချင်းချင်းကွဲကြပြဲကြတာတွေ တဦးနဲ့ တဦးအပြန်အလှန်ပုတ်ခတ်တာတွေချည်းတွေ့ ရတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသူတွေရဲ့အမြင်မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေ ဆိုတာ ဒီလိုဘဲကွဲကြပြဲကြတိုက်ခိုက်နေကြတာဘဲ၊ဘယ်သူမှမကောင်းပါလားလို့ ယူဆထားစရာဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ အမတေဖြစ်တဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ် ဗိုလအောင်ဆန်း၊ဗိုလ်လင်္ကျာ၊ဗိုလ်စင်္ကြာ၊ဗိုလ်နေ၀င်း၊ ဗိုလ်ဇေယျ၊ဗိုလ်ရန်အောင်၊ဗိုလ်မှုးအောင်၊ဗိုလ်ဗလ၊ဗိုလ်တာရာ၊စတဲ့ပဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာ သခင်ဘွဲ့ ခံနိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့အချက်မှေးမှိန်ကွယ်ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။နားမလည်နိုင်ဘူး ညီညွတ်ရေးအရေးကြီးပုံကို ပြောချင်လို့ အကွဲအပြဲတွေကို ပြန်ဖေါ်ထုတ်တာဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလည်းမှန်တယ်မထင်ပါဘူး။ ညီညွတ်ရေးအကြောင်းတခြားပြောစရာပြစရာ နမူနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။၁၃၀၀ပြည့်အရေးတော်ပုံကြီးအကြောင်း၊၁၉၂၀၊၁၉၃၆ကျောင်းသားသပိတ်ကြီးအကြောင်းတို့ ၊နေသူရိန်အစည်းအဝေးကြီးအကြောင်းတို့ ။ပင်လုံညီလာခံအကြောင်းတို့ လိုအကြောင်းတွေမနည်းလှပါဘူး။ဒါတွေကိုဇောင်းပေးဖေါ်ထုတ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ ကွဲတာပြဲတာတွေချည်းဖေါ်ထုတ်နေကြတာတော့ နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်ရပါတယ်။လူ့ လောကမှာအမြင်သဘောထားခြင်းမတူကွဲပြားတာဟာလူ့ သဘာဝဖြစ်တယ်။ကဲ့ရဲ့ ရှုတ်ချရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး၊နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကလည်းလူ့ လောကအရေးကိုလုပ်ကြတာဘဲ။အဲဒီတော့သဘောများအယူအဆကွဲပြားတာတွေ ဆွေးနွေးငြင်းခုန်တာတွေ ရှိမြဲဖြစ်တယ်။ ငြင်းခုန်တာလူ့ သဘာဝ ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ခြင်းဟာရန်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။သမ္မတ အိုဘာမားရဲ့ ကျန်းမာရေးဥပဒေကို အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံလုံးငြင်းးခုံခဲ့ကြသလိုလွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံးမှာလည်းငြင်းခုံဆွေးနွေးကြတာပါဘဲ။လွှတ်တော်ထည်းမဲခွဲတဲ့အခါမှာလည်းအိုဘားမားရဲ့ ပါတီကဒီမိုကရက်အမတ် ကန့် ကွက်မဲပေးသူတွေရှိခဲ့သလို၊ပြိုင်ဘက်ရီပတ်ဘလစ်ကန်အမတ်တွေကထောက်ခံမဲပေးသူလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုငြင်းခုန်ခဲ့ကြလို့ ကန့် ကွက်/ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြလို့ ဘယ်ပါတီမှနှစ်ခြမ်းမကွဲသွားသလို ဘယ်အမတ်ကိုမှလည်းသူ့ ပါတီတွေကပုတ်ခတ်မပစ်ခဲ့ကြဘူး။ ဂျပန်နိုင်ငံက LDP ဆိုတဲ့ပါတီကြီးဆိုရင် ဂိုဏ်းအုပ်စုတွေ တစ်ဒါဇင်လောက် တရားဝင်တည်ရှိနေတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်။ဒါတောင် LDPဟာနိုင်ငံရေးအာဏာကို တစ်လျှောက်လုံးနီးပါး၊ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်ခဲပါတယ်။ဂိုဏ်းအုပ်စုတွေကြောင့် ပါတီအစိတ်စိတ်အမွှာမွှာကွဲတာမျိုး မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။သဘောပေါက်သင့်တယ် စိတ်ဓါတ်အတွေးအခေါ်ရင့်ကျက်သူတိုင်းငြင်းခုန်တာဟာရန်ဖြစ်တာမဟုတ်၊ကိုယ်နဲ့ အယူအဆမတူတိုင်းရန်သူဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဆိုတဲ့သဘောသဘာဝကိုနားလည်ကြပါတယ်။ဂျာနယ်တွေကဒီအချက်ကိုသဘောပေါက်ထားသင့်တယ်။မီးလောင်ရာလေပင့်သလိုဖြစ်မသွားအောင် သတိထားဆင်ခြင်သင့်တယ်။ငြင်းခုံတိုင်းရန်ထဖြစ်တာမရင့်ကျက်သေးတဲ့ကလေးတွေရဲ့ အပြုအမှုဖြစ်တယ်။ရင့်ကျက်သူတွေဟာငြင်းတိုင်းရန်ထမဖြစ်ဘူး၊ကိုယ့်နဲ့ မတူကိုယ့်ရန်သူလို့ သဘောမထားဘူး၊မတူပေမယ့်လက်တွဲမဖြုတ်တမ်းနေချင်ကြတယ်။အိုဘားမားနဲ့ ဟီလာရင်ကလင်တန် ဟာအကြီးဆုံးပြိုင်ဘက်ကြီးများအဖြစ် တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးအပြင်းအထန်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ကြငြင်းခုန်ခဲ့ကြတာဘဲ။ဒါပေမယ့်အခုတော့သမ္မတနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်လက်တွဲနေနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဟာရင့်ကျက်ခြင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးသာဓကဖြစ်တယ်။ ကျေးဇူးကန်းရာရောက်ရောက်မယ် ဂျာနယ်တွေအနေနဲ့ နှောင်းခေတ်လူငယ်တွေကို နိုင်ငံရေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့ဗဟုသုတဖြန့် ဝေပေးရာမှာဒီအချက်တွေကို အလေးအနက်ထားစဉ်းစားပြီးမှပေးသင့်တယ်။နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာဘယ်သူမှမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ အမြင်မှားတွေဖြစ်ပေါ်စေမယ့်အကြောင်းတွေကိုရှောင်ရှားသင့် တယ်။လူငယ်တွေလက်ထဲဒီလိုအမြင်မျိုးစွဲသွားရင် နယ်ချဲ့ သမားတွေနဲ့ ဖက်ဆက်တွေကို အသစ်စွန့် တိုက်လိုက်ပြီး တိုင်းပြည်လွှတ်လပ်ရေးရအောင် မပစ်ဖပစ်၊အိုးပစ်အိမ်ပစ်၊သားပစ်မယားပစ်၊ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးများကို ကျေးဇူးကန်းရာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ သတိထားကြ၊ဆင်ခြင်ကြစေလိုပါတယ်။ "လူထုစိန်ဝင်း"
သူတို့ပြောတဲ့ (၂၀၀၈) အခြေခံဥပဒေနဲ့ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ သရုပ်မှန်(တူမောင်ညို ) (၂၀၁၀ ဇူလိုင် ၂၉ ရက်) “၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာအဓိကပန်းတိုင်မဟုတ်ဘူး” ၊ ရွေးကောက်ပွဲနည်းနဲ့ စနစ်တစ်ခုကိုတိုက်ဖျက်နေတာသာဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြည်တွင်းမှာ သူတို့ နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ကြုံနေရတာတွေကိုပဲ အသိအမှတ်ပြီးပြောတာလား/ ဝန်ခံချက်ပေးတာလား /ရင်ဖွင့်တာလားတော့ မပြော တတ်ပါ။ မှတ်ပုံတင်ပါတီတစ်ခုက နိုင်ငံရေးသမားတဖြစ်လည်း ကဗျာဆရာ/ စာရေးဆရာလေး တစ်ဦး ရဲ့“ထွေရာလေးပါး” ဆိုတာထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ မေးခွန်းလေးတွေပဲ မေးချင်တာပါ။ အဓိကပန်းတိုင်မဟုတ်ဘဲ ဘာကြောင့်များဦးတည်သွားနေရတာလဲ။ ရွေးကောက်ပွဲနည်းနဲ့တိုက်ဖျက်နေတဲ့ “စနစ်” တစ်ခုဆိုတာ ဘယ်လိုစနစ်မျိုးလဲ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖျက်နေတာလို့ပြောချင်တာလား။“ပြောချင်တာကိုပြောခွင့်မရရင်နေ၊မပြောရဲတာတော့လုံးဝမပြောဘူး” ဆိုတာမျိုးလား။ စိတ်ကူးမယဉ်ကြေး ပြောကြရအောင်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ“တည်ထောင်ခွင့်/ဆက်လက်တည်ထောင်ခွင့်”စတင်လျှောက်ထားကတည်းကနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ၊ ပုဒ်မ (၆) ကို ဝန်ခံချက်လက်မှတ်ရေးထိုးထားခဲ့ရတယ်မဟုတ်ပါလား။ အဲဒီလို ဝန်ခံချက်လက်မှတ်ထိုးရကတည်းက “စစ်ဦးစီးချုပ်ကရွေးချယ်စေလွှတ်တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ပြည်သူတွေကရွေးချယ်တဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ရပ်ပူးပေါင်း အုပ်ချုပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရစနစ်”ဆိုတဲ့ စနစ်တစ်ခုကို ခင်ဗျားတို့ လက်ခံထားရပြီမဟုတ်ပါလား။ ကိုယ်မကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စနစ်တစ်ခုကို အရင်လက်ခံပြီးမှ ပြန်လည်တိုက်ဖျက်တယ်ဆိုတဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ကတော့အများ နဲ့ မတူတဲ့ ပို့စ်မော်ဒန်လုပ်ဟန်တစ်ခုများလား။ ၂၉ ဇူလိုင် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာထဲမှာ “၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့သရုပ်မှန်နဲ့ ပြည်သူ့တာဝန်” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ “ကျော်မြင့်နိုင်” ဆိုသူက ဆောင်းပါးရေးထားတယ်။ ကျော်မြင့်နိုင် ဆိုသူရဲ့ သရုပ်မှန်ကဘာလဲ။ သူ့သရုပ်မှန်ကို သူ့အရေးအသားတွေထဲကပဲကောက်နှုတ်ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ - “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈)နဲ့ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးရှေ့ခရီးမှာ ပထမ တာထွက် ခြေလှမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်” - “စစ်အစိုးရအသွင်ဖြင့် ဆက်လက်အုပ်ချုပ်နေရန် မသင့်တော်တဲ့အနေအထား” -“ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးပြီး အနိုင်ရတဲ့ပါတီကို လက်လွတ်စပယ်အာဏာလွှဲပေးလိုက်ခြင်း အားဖြင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးချိန်နဲ့ မရှေးမနှောင်း ရောင်စုံသောင်းကျန်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အနေအထားမျိုးသို့ ပြန်လည်ဆိုက်ရောက်မသွားနိုင်ဖို့ အာမခံချက်မရှိသေးတဲ့ တိုင်းပြည်အနေအထား” - “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) မှာ တပ်မတော်မှရွေးချယ်စေလွှတ်တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် လူထုက ရွေးချယ်တဲ့ လူထုကိုယ်စားလှယ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းတို့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမှာ ပူးတွဲရှေ့ဆောင်သွားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်” - “နောက်ပြန်လန်မကျပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်လာရေးမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ရေးဟာ အဓိကဖြစ်တဲ့အတွက် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူပြည်သူအားလုံးကမပျက်မကွက်မဲပေးကြရေးဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးလိုလားတဲ့ ပြည်သူတိုင်းရဲ့တာဝန်သာဖြစ် တယ်” ဆိုတာပါပဲ။ သူပြောတာကိုချုပ်လိုက်တော့ “စစ်အစိုးရအနေနဲ့ဆက်အုပ်ချုပ်လို့ မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် စိတ်ကြိုက်အခြေခံဥပဒေရေးထားတယ်။ ဒီအခြေခံဥပဒေ အသက် ဝင်ဖို့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရမယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေက မပျက်မကွက်မဲပေးကြပါ။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးလည်းအနိုင်ရပါတီ ကို အာဏာလွှဲမပေးနိုင်ဘူး”ဆိုတာပါပဲ။ သူ့ထက်သရုပ်မှန်တာတောင် သူ့လောက်သရုပ်မမှန်ဘူးလို့ပဲပြောရပါတော့မယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀ဂ)ကိုလက်ခံ/၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ မဲပေးကြတဲ့။ နှစ်ပေါင်း ၂၂ကျော်ကြာ (နဝတ-နအဖ)စစ်အစိုးရက အကြမ်းဖိနှိပ်အုပ်စိုးခဲ့တာတောင် တိုင်းပြည်အခြေအနေက “၁၉၄၈-၄၉ အနေ အထား” သို့ ပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်၊ အာမခံချက်မရှိသေးဘူးလို့ ဝန်ခံထားတယ်။ တပ်မတော်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးမှ စစ်ဦးစီးချုပ်က ရွေးချယ်စေလွှတ်တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ပြည်သူတွေ ကရွေးချယ်တဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ရပ်ပူးပေါင်း အုပ်ချုပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရစနစ် အတွက်ရေးဆွဲထားတဲ့ “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀ဂ) နဲ့ မကြာမီကျင်းပပေးတော့မည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်ရေးဖြစ်တယ်လို့ ဝေဖန်ဆန့်ကျင်နေကြတယ်ဆိုတာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါကြောင်း” ကျနော်တို့ကလည်ုးရဲရင့်တည်ကြည်စွာ ဝန်ခံလိုက် ပါတယ်။